मायाको लाइन – मझेरी डट कम
उसको र मेरो सम्बन्धमा न माया थियो न सम्मान । हरेक पल कष्टकर रहेको त्यो सम्बन्ध कुनै पनि बेला टुट्न सक्छ भन्ने लाग्थ्यो, मनमा । कति सहनु मैले मात्र? सम्झाएकै थिएँ पटक-पटक उसलाई र आफ्नो मनलाई पनि, “चित्त नबुझेको कुरामा हामी छलफल गरौँ । केही कुरा तिमी मान केही कुरा म मान्छु । मिलेर बस्नुपर्छ । जिन्दगी लामो छ । मुख कालो बनाएर कसरी जिन्दगी बिताउनू?” भनेकै हुँ हरेक असहमतिहरूमा ।
तर, उसले मेरो कुरा कहिल्यै सुनेन । “मेरो सल्लाह मान्छौ भने तिमी र म झगडा नगरौँ । तिमीलाई मन लागेको तिमी गर । मलाई मन लागेको म गर्छु ।” सम्झौताको हदमा पुगेर मैले सल्लाह दिएकी थिएँ । मेरो सल्लाहले उसको पुरुष अहंमा ठेस पुग्यो सायद । त्यो साँझ अरू साँझभन्दा ज्यादा कुट्यो मलाई । अरू साँझझैँ चुपचाप सहेर बस्न्ा मन लागेन त्यो साँझ र उल्टै उसैको हात समातेर उसलाई भकुरेँ ।
“किन विवाह गर्न खोजेको?” मैले सोधेँ ।
उनले मलाई पुलुक्क हेरिन् । गोरो अनुहारमा कालो आँखा र आँखाभरि असरल्ल छरिएका दुःख । “मलाई बच्चाको बाबु चाहिएको छ । म चाहन्छु मेरा बच्चाले टुहुरो हुन नपरोस् ।”
“तिमीलाई लोग्ने चाहिएको छैन?” मैले सीधै सोधेँ । मेरो काम नै उनीहरूलाई लोग्नेस्वास्नी जुराइदिने भएको छ, यतिबेला ।
“मेरो जीवन म जसरी पनि बिताउँथेँ । तर, यो आतंकमा मेरो बच्चालाई एक्लै जोगाउन गाह्रो छ,” उनले काखमा च्यापेको बच्चातिर हेर्दै भनिन् । उनले बताए अनुसार उनका दुई बच्चा रहेछन् । यति कलिली नाबाहानी उस्मानका दुई बच्चा? उदेक लाग्छ । ‘यी मुस्लिमहरू बच्चा जन्माउनका लागि मात्र बिहे गर्छन् कि क्या हो?’ मनमनै सोच्छु ।
“हामी अब बिहे गर्न चाहन्छौँ,” इस्माइलले भने ।
“यस विवाहलाई दिगो बनाउन सक्छौ?” मैले इस्माइललाई सोधेँ ।
“कतैबाट मारिएनौँ भने हामी छुट्टदिैनौँ,” इस्माइल मुस्कुराए । नाबाहानीले मायालाग्दो गरी इस्माइललाई हेरी । वर्षौँदेखिका प्रेमीप्रेमिकाजस्ता उनीहरू एकअर्कालाई हेरिरहेका थिए ।
विवाहका दिन नाबाहानीले मेरा दुवै हात समातिन्, “भोलि बेलुकाको खाना हामीकहाँ है?”
मैले ‘हुँदैन’ भनेँ । इस्माइल पनि नजिकै आए र दुःखी अनुहारमा भने, “कानो सहरमा हामीसँग हाम्रो बच्चाबाहेक अरू कोही छैनन् । तपाईंले हामीलाई भेटाइदिनुभयो । हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ ।”
नाबाहानीले आँखाभरि आँसु पारेर मलाई हेरिन्, “हामी दुःखी छौँ, गरिब छौँ, आफ्नै देशमा असुरक्षित छौँ । तर, हाम्रो पनि मन छ म्याडम ।” मलाई कता कता दुख्यो । भावुकता त रहेछ नि यहाँ पनि! सम्झौता गरे सम्बन्ध प्रेम पनि बन्दो रहेछ, यस्तै लाग्यो । तर, म सम्बन्धहरूबाट भागेकी स्वास्नी मानिस । मलाई उनीहरूसँग जोडिनु छैन । सम्बन्धले दुःखबाहेक केही दिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । भर्खरै जोडिँदै गरेका उनीहरूलाई यो सब कसरी बताउनू?
मैले ‘भोलि बेलुकाको खाना तिमीहरूकहाँ पक्का’ भनेपछि उनीहरू खुसी भएर गए ।
बिहानै नाबाहानीले फोन गरिन्, “बिर्सिनुभएको त छैन नि?” म हाँसे, “आउँछु ।”
“किन?” मैले सोधेँ ।
“दही लिन,” नाबाहानीले जवाफ दिइन् । कानो सहरको इकाबिला रोडमा अवस्थित उनीहरूको घर बजारनजिकै थियो । मस्जिदनजिकैको बजार मिठाइ र दहीका लागि चर्चित थियो ।
इस्माइल बाहिर निक्लेलगत्तै आएको ठूलो आवाजले हामी तर्सियौँ । आवाज बम विस्फोटनको थियो । एक्कासि कोलाहल सुनियो । मानिसहरूको भागदौड मच्चियो । प्रहरीका भ्यान र एम्बुलेन्सहरू दगुरेको आवाज पनि सुनियो । नाइजेरियाका प्रहरीहरू मलाई लिन आए, “सुरक्षा अवस्था बिग्रिएको छ, तपाईँ छिट्टै होस्टेल हिँड्नूस् ।”
म केही नबोलेको देखेर प्रहरी अधिकारी रसिाए, “बाहिर अवस्था बिग्रिएको छ । छिटो हिँड्नूस् । विदेशी पाहुनाको सुरक्षा हाम्रो पहिलो दायित्व हो ।”